के कोरोनाले आइपिएललाई असर गर्दैन?
काठमाडौं- विश्व खेलकुदमा कोराना भाइरसको जोखिमबाट जोगिन विभिन्न काम भइरहेका छन्। बन्द रंगशालामा खेल गरिएका छन्, कतिपय खेल स्थगित भएका छन्, कतिपय खेल सारिएका छन्। तर विश्वको सर्वाधिक महँगो खेल प्रतियोगिता इन्डियन प्रिमियर लिग (आइपिएल) नरोकिने गरी भारतीय क्रिकेटको सर्वोच्च निकाय (बिसिसिआई) नै लागिपरेको छ।
कोरोनाको संक्रमण बढिरहेको छ, उसैगरी ज्यान गुमाउनेको संख्या पनि बढ्दो छ। ७० भन्दा बढि देशमा देखिएको यो भाइरसले फैलाएको त्रासबीच पनि भारतमा भने आइपिएल क्रिकेट चैत १६ गतेदेखि नै सुरु हुँदैछ। आइपिएल विश्वकप क्रिकेट भन्दा पनि बढी दर्शक मैदानमै पुगेर हेर्ने प्रतियोगिता हो।
करोडौं क्रिकेट समर्थकले हेर्ने खेल उत्सवलाई कोरोना भाइरसले कुनै असर नै नगर्ने हो त? भिडभाड र सभा सम्मेलन नगर्ने विषयमा विश्व लागिरहँदा आइपिएल त्यसको जोखिममा छैन? बिसिसिआईका अध्यक्ष सौरभ गांगुली आइपिएल तोकिएकै मितिमा हुने बताइरहेका छन्।
इटालियन लिग फुटबल ‘सिरि ए’ का खेलहरु नै सार्नु परेको छ। इंग्लिस प्रिमियर लिग र च्याम्पियन्स लिगका खेलहरु दर्शकबिना खेलाउनु परेको छ। त्यस्तै, नेपालमा चैत १ गतेदेखि सुरु हुने भनिएको एभरेष्ट प्रिमियर लिग अनिश्चित कालको लागि रोक्नु परेको छ। मार्च १६ गतेदेखि मलेसियामा हुने आइसिसी विश्वकप च्यालेन्ज लिग कोरोनाकै कारण सार्नु परेको छ। तर आइपिएल भने गरेरै छाड्ने आयोजकको तयारी छ।
जापानमा हुने टोकियो ओलम्पिक आउन करिब चार महिना बाँकी छ। तर अहिले अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीमा कोरोनाको कारण प्रतियोगिता सार्ने विषयमा बहस चल्न थालेको छ। कोरोनाले अझै विकाराल रुप लिए ओलम्पिक सर्ने निश्चित जस्तै हुँदा २३ दिनपछि सुरु हुने आइपिएल भने नसर्ने आयोजकले संकेत देखाइसकेको छ।
बिसिसिआईका अध्यक्ष गांगुलीले भनेका छन्, ‘आइपिएल हुन्छ। कोरोनाविरुद्ध बिसिसिआईले सावधान अपनाउँछ।’
आइपिएलको खेलको दौरानमा खेलाडी, अफिसियल तथा दर्शकमा कोरोना देखिए यसले कस्तो रुप लिन्छ? यसको अध्ययन त बिसिसिआइले नै गरेर प्रतियोगिता नसर्ने भनेको होला त?
बिहीबारसम्म भारतमा २९ जनामा कोरोना भाइरस भेटिएको थियो। जसमा १६ जना इटालियन पर्यटकमा भएको भन्दै आइपिएल खेलाउनु पर्ने भारतीय सञ्चार माध्यमको जोड छ। हुन पनि अरबौं रुपैयाँको कारोबार हुने आइपिएल रोकिनु भनेको बिसिसिआईलाई ठूलो धक्का लाग्नु हो। त्यसकारण पनि बिसिसिआई जसरी भए पनि प्रतियोगिता आयोजना गर्न जोड दिइरहेको छ।
बिसिसिआईका अध्यक्ष गांगुलीले अघि थपेका छन्, ‘आइपिएल भएरै छाड्छ। त्यसको लागि बोर्डले आवश्यक पर्ने सबै सुरक्षाको ब्यवस्था गर्छ।’
प्रधानमन्त्री ओलीको जन्मथलो चुहानडाँडामा आन्तरिक विमानस्थल
गरीब र विपन्न परिवारलाई विद्युत जडान निःशुल्क, ग्रामिण विद्युतीकरणका लागि ४ अर्ब बजेट
४ विमानस्थलका लागि १९ अर्ब ४२ करोड
प्रधानमन्त्री ओलीको जन्मथलो चुहानडाँडामा आन्तरिक विमानस्थल बिहीबार, जेठ १५, २०७७
गरीब र विपन्न परिवारलाई विद्युत जडान निःशुल्क, ग्रामिण विद्युतीकरणका लागि ४ अर्ब बजेट बिहीबार, जेठ १५, २०७७
‘हिटेड टोबाको प्रडक्ट’ र ‘ई-सिगरेट्स’को उत्पादन र बिक्री वितरणमा बन्देज लगाउन अभियान चलाइँदै बिहीबार, जेठ १५, २०७७
४ विमानस्थलका लागि १९ अर्ब ४२ करोड बिहीबार, जेठ १५, २०७७
यी हुन् आगामी आर्थिक वर्षमा निर्माण सुरु गरिने १ दर्जन जलविद्युत आयोजना बिहीबार, जेठ १५, २०७७